Ubomi no-Elvis Presley ngo-1955
Ibali lika-Elvis Presley
Nanku ukujonga okufutshane noko ubomi buka- Elvis Presley nobomi bakhe bufana no-1955 .
Ngo-1955 u- Elvis Presley wayephumelele iphupha lakhe lokuba ngumculi weengoma, nangona ukuba wayengenakuqhathaniswa kwaye sele edala ukuphikisana nokunyuka kwakhe kwintlambo kunye nentliziyo engaqinisekanga. Kodwa iirekhodi zibonisa ukuba indlela ka-Elvis yokunyamezela, ngelixa ikhawuleza, yayingekho ntoni yomsebenzi kuye-ekufumene ikhaya lomculo eSun kunye nebhendi yokutyelela eyaqonda ukuxuba kwakhe ilizwe, i-blues, i-R & B kunye ne-pop, U-Presley wayechithe phantse yonke imihla enye yonyaka esebenza ngayo, ehamba esuka eNew Mexico ukuya eCleveland eya eFlorida Everglades aze enze nantoni na eyayiza kuba nayo.
Kwaye umntu owake waphila ngamava asemaphandleni yayiquka ngokugqitywa kwindawo yesihlanu kwi-Mississippi-Alabama Fair kunye neMiboniso yezobisi ngexesha elilishumi elineminyaka ngokucula "Old Shep," wafunda ngokukhawuleza; inkwenkwe ihlawulelwa ngokubambisana kwamagama athi "hillbilly" kunye "bop" yaqala ngo-1955 isebenza okwesithathu okanye yesine kwilwayo-mali, ngamanye amaxesha kwindlu yakhe yasekhaya yaseMemphis, kodwa ngo-Matshi, wayethelela. NgoMeyi, iimbonakalo zakhe zenza ngokoqobo intlungu. NgoJuni, wayedlulele umphathi wakhe. NgoJulayi, wawabetha iitshathi zelizwe. Ngo-Oktobha, wayedlulisa iilebula yakhe. Kwaye ekupheleni konyaka, wayekulungele ixesha elide.
Ininzi yale nto yayinokubakho ngokubonakala kwakhe rhoqo kwiRadioana Hayride kwi- radio show evela eShreveport, LA, kodwa ukuze uqonde ngokupheleleyo ubukhulu be-Presley hysteria, kwafuneka ube neziboniso. Ngo-1956, u-Elvis wayeya kuhlangana nomabonwakude. Yaye zombini iya kutshintshwa ngokungenakwenzeka.
Elvis Presley Umlinganiselo: 1972
Elvis Presley Umlinganiselo: 1956
Yintoni i-Dow Jones Ishicilelo seZoshishino?
Ummangaliso Umthandazo wokukhathazeka
Kutheni Iintaba Ziguquka?
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uFilipu Kearny
Isicwangciso seSifundo seSifundo seMboniselo
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiNkomfa enkulu ye-12
La Isabela - Columbus's First Colony eMelika
Iziqwenga ezibi zikhohlakeleyo ezingajonga lutho njengezihloko zazo eziziwayo
7 Iingoma ngee-Killers Serial
Ukutshintsha i-Trunk eWorn okanye i-Emblem yangasese
Ukuthelekisa iNkqubo yeMali kunye neMali
Ukuqonda kakuhle ulwimi
I-22 I-Best Tupac Iingoma Zonke Ixesha